श्रावण ३२, २०७७ आईतवार
कीर्तिपुुर, साउन ३२ गते । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उपचारका लागि हालसम्म पनि भरपर्दो औषधि आविष्कार हुन नसकेका बेला नेपालमा आयुर्वेदिक पद्धतिले छोटो समयमै सङ्क्रमित बिरामीले स्वास्थ्य लाभ पाउन थालेका छन् ।
कोरोनाका लागि आयुर्वेदिक पद्धति रामवाण नै नभए पनि सङ्क्रमितले चाँडो स्वास्थ्य लाभ गरेपछि चिकित्सक र बिरामीमा उत्साह देखिएको छ । कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा भर्ना भएका कोरोनाका ३३ जना बिरामी सात दिनमै निको भएर घर फर्किएका छन् । उनीहरूलाई स्वास्थ्य लाभ हासिल गर्न दुुई साताको समय पनि लागेन । अरू बिरामी पनि निको हुने क्रम बढ्दो छ ।
यसैगरी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने जडीबुटी मिलाएर बन(ाइएको औषधि खान दिइएको छ । त्यसको सात दिनपछि पीसीआर परीक्षण गराउँदा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो, कोरोना देखिएन । कोरोना पुष्टि भएपछि आत्तिनुुभएकी भक्तपुरकी २२ वर्षीया नर्स कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अनुसन्धान अस्पतालमा भर्ना हुनुभयो । आफूूले बिरामीलाई एलोपेथिक औषधि मात्र सेवन गर्न दिने उहाँले कहिल्यै आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गर्नुभएको थिएन ।
“आयुर्वेदिक चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम सोही औषधि खाएँ, दस दिनमा त मलाई निको भयो । परीक्षणमा कोरोना देखिएन,” उहाँले आयुर्वेद पद्धतिमा आफ्नो विश्वास बढेको बताउनुुभयो । उहाँले दैनिक तीनपटक दुई गोली औषधि खान दिइएको र त्यसैले कोरोनालाई सजिलै जितेको अनुभव सुनाउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि नकारात्मक (साइडइफेक्ट) असरसमेत देखा परेको छैन ।
उहाँ मात्र होइन, बागलुङका ३५ वर्र्षीय जङ्गबहादुर केसी पनि कोरोनालाई जित्न आयुर्वेदिक औषधिले धेरै मद्दत गरेको बत(ाउनुहुन्छ । कतारबाट नेपाल आउनुभएका केसी भक्तपुरस्थित राधे राधेमा होल्डिङ सेन्टरमा बसेपछि पीसीआर गराउँदा पोजेटिभ देखिएको थियो । कोरोनाको लक्षण नदेखिएका उहाँले अस्पतालमा हँुदा तातोपानीमा बेसार र नुन हालेर दैनिक रूपमा खानुहुन्थ्यो ।
केसी भन्नुहुन्छ, “अस्पतालको व्यवस्था धेरै राम्रो छ, कोठामै तातोपानीको व्यवस्था थियो र दैनिक रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने आयुर्वेदिक औषधि दिनको तीनपटक खान दिइन्थ्यो ।” आठ दिनमा नै कोरोनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि घर फर्केको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “हाल हर्बल टी र च्यवनप्रास सेवन गरिरहेको छु । अहिले म आफूूलाई स्वस्थ र बलियो महसुस गरिराखेको छु ।”
गत असार २५ र २६ गते भर्ना भएका उहाँहरू एक हप्तामै डिस्चार्ज भएको अस्पतालले जनाएको छ । डा. जोशीले पहिलोपटक २० जना कोरोना सङ्क्रमित आएका र हाल सबै डिस्चार्ज भएको जानकारी दिनुभयो । त्यसलगत्तै दोस्रोपटक २० जना भर्ना भएको र १४ जना डिस्चार्ज भइसकेको जनाइएको छ ।
आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका चिकित्सक तथा कोभिड–१९ का संयोजक डा. जितेन्द्र श्रेष्ठले अब दैनिक रूपमा सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि अस्पतालमा हाल १६७ जना रहेको जानकारी दिनुभयो । त्यसमा पुरुष १२१ र महिला ४७ जना उपचाररत हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पनि सोही औषधि प्रयोग गरिएको र सबैको अवस्था सामान्य रहेको जनाइएको छ ।
अहिलेसम्म दुई जनालाई गङ्गालाल अस्पताल र एक जनालाई आईसीयूका लागि टेकु पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो । भर्ना भएकामध्ये तीन जनामा सामान्य रुघाखोकी, श्वास फेर्न गाह्रो हुने र ज्वरो आउनेजस्ता मध्यम लक्षण देखिएका थिए भने अरूमा खासै लक्षण नदेखिएको डा. श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
डा. जोशीले सङ्क्रमितलाई शरीरको प्रतिरक्षा शक्ति बढाउन गुर्जो, पिप्ला, अश्वगन्धा, तुलसी, मरिचलगायत जडीबुटीबाट बनेको औषधि खुवाइएको जानकारी दिनुभयो । औषधिका साथै खानामा समेत विशेष ध्यान दिइयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोरोना सङ्क्रमणलाई भिटामिन सी, खनिजमा जिङ्क भएको खाना मिलाएर दिने गरेका छौँ ।” खाना र औषधिका साथै मेडिटेसन, सामान्य नाचगान तथा योगा गर्नका लागि मौखिक रूपमा भनिएको र धेरै बिरामीले पालना गर्ने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ ।